थ्रेडिङ गरेपछि महिलाले भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती, भोग्नुपर्नेछ अनेकथरी समस्या – Daily NpNews
हात फुटेर समस्या परेको छ ? उसोभए अपनाउनुहोस् यी ७ टिप्स
नयाँ इन्जिनसहित नयाँ लुक्समा यामाहाको एमटी-१५ (विशेषता सहित)
शरीरका अनावश्यक रौँ हटाउन मन छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
श्रीमानकोले काम गर्दैन भन्ने थाहा पाएपछि मैले भाईसँगबाट सुटुक्क बच्चा बनाए, बच्चामा केही असर पर्छ की ?
यो खुट्टाको औला सामाजिक सञ्जालमा बनिरहेकोल छ भाइरल
खुट्टामा यस्ता ६ चिन्ह हुने महिलासँग बिवाह गर्नु निकै शुभ !
सुत्ने बेलामा मोबाइल साईडमा राख्ने गर्नुभएको छ?बेलैमा थाहा पाउनुहोस्,खतरामा छ हजुरको ज्यान।
के तपाईंलाई हेर्दै चिटिक्क घर चाहनुहुन्छ? १४ लाखमै बनाउन सकिन्छ ४ कोठे घर
१६ वर्षीया नेपाली किशोरी फेसबुकमा चिनजान भएका केटासाथी भेट्न एक्लै काठमाडौंबाट भारतको भोपाल पुगेपछि…
ढाँड दुख्ने समस्याले सतायो ? यस्तो छ घरेलु उपचार विधी, केही समयमा नै बनाउनेछ सन्चो
मुख्य पृष्ठ /रोचक/थ्रेडिङ गरेपछि महिलाले भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती, भोग्नुपर्नेछ अनेकथरी समस्या
थ्रेडिङ गरेपछि महिलाले भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती, भोग्नुपर्नेछ अनेकथरी समस्या
काठमाडौँ । महिलाको निम्ति अनिवार्य जस्तै हो, थ्रेडिङ । थ्रेडिङ अर्थात शरीरका अनावश्यक रौं उखेल्ने काम। हात, पाखुरा लगायतका रौंदेखि आँखी भौं आसपासका रौं उखेल्न महिलाहरु महिनामा दुई पटकसम्म पार्लर धाउने गर्छन् । कतिले घरमै पनि थ्रेडिङ गर्छन्।
तर थ्रेडिङपछि हुने दुखाई र खटिराबाट छुट्कारा पाउनका लागि आम युवतीहरुले केही गल्ति गर्छन्। यसबाट पछि उनीहरुले विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ।
थ्रेडिङ गराएलगत्तै घाममा निस्किनु हुँदैन । घाममा निस्किँदा विभिन्न समस्या हुन सक्छ। जब हामी शरीरको कुनै हिस्साको रौं निकाल्छौं, त्यो स्थान पूर्णरुपमा संवेदनशील हुन्छ । त्यसैले तपाईं यो समस्याबाट बच्नका लागि घाममा निस्किनबाट जोगिनुपर्छ।
प्राय महिलाहरुले गर्ने गल्ति यही हो । कुनै पार्टीमा जानुपर्ने छ भने हतार(हतार थ्रेडिङ गराएर तुरुन्त मेकअप गर्न थाल्छन् । यो विल्कुल गलत हो। यसले छालामा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले थ्रेडिङ गराएको २४ घन्टापछि मात्रै मेकअप गर्नुपर्छ ।औंला नलगाउने
थै्रडिङ गरेपछि महिलाहरुले गर्ने अर्को गल्ति के हो भने उनीहरु त्यो स्थानमा बारम्बार टच गरिरहन्छन्। यसो गर्नु निकै हानीकारक हुन सक्छ। यदि थ्रेडिङ गरिएको स्थानमा लगातार टच गरियो भने इन्फेक्सन हुने, चिलाउने वा ब्रेकआउट हुने समस्या हुनसक्छ।
थ्रेडिङ गरेपछि महिलाहरु त्यो स्थानमा कन्याउन थाल्छन् । यसो गर्नु झन् खतरनाक हुन्छ । यदि चिलायो भने पनि सकभर कन्याउनु हुँदैन।
यदि असैह्य हुने गरी चिलायो भने कन्याउनुको साटो मसाज गर्नुपर्छ । आफ्नो अनुहारलाई चिसो पानीले धुनुस र गुलाब जलमा एलोबेरा मिसाएर यसमा मसाज गरौं । यसो गर्दा सर्प पनि मर्छ र लठ्ठी पनि भाँचिदैन ।
मोइस्चराइजरले मसाज गर्ने
केही महिला थ्रेडिङ गरि।सकेपछि आफ्नो आँखिभौंलाई यत्तिकै छाडिदिन्छन् । यसबाट आखिभौंमा रुखोपना उत्पन्न हुन्छ। यसले गर्दा चिलाउने वा पोल्ने हुन सक्छ । यसबाट बच्नका लागि मोइस्चराइजरले मसाज गर्नु आवश्यक छ । यसले तपाईंको आँखिभौंलाई थप राम्रो बनाउँछ।
यस्ता महिलालाई हुन्छ पाठेघरको मुखको क्यान्सर, देखिन्छ यस्तो लक्षण
भाग्यमानी व्यक्तिमा मात्र हुन्छन् यस्ता ५ लक्षण, कतै तपाई नि पर्नुहुन्छ कि ?
कुकुरले यसरी बचायो एक बालक र बालिकाको ज्यान, आफू भने सधैंका लागि अस्तायो
याै न जीवन कसरी खुसी राख्ने ? महिलाबारे पुरूषले जान्नैपर्ने ५ कुरा !
आँगन खन्दा भेटियो देख्दै सातो जाने बस्तु, त्यो भित्र खोलेर हेर्दा झण्डै ढलेनन् यि